Calvin Klein dia iray amin'ireo trano fidiovana tena tsara indrindra misy ankehitriny. Azo antoka fa izao tontolo izao no manadino ny afisy "The Last Supper from Klein", na ny sary malaza amin'ny Brooke Shields, izay nanonona jeans ho fanamafisana ny firaisana ara-nofo, ary noho ny amin'izany dia nampangaina ho namorona sary vetaveta i Kelvin. Ankoatra izany, mahatsiaro ny rehetra fa misaotra an'i Calvin Klein izahay mahita lehilahy manambady tsy manan-tsiny amin'ny tolotrasa dokam-barotra, raha vao nampiditra fomba fanao tahaka izany izy, izay, araka ny hita, dia tena mahomby.
Ny filazana fa Calvin Klein dia marika scandalous dia tsy midika inona na inona holazaina, fa ahoana no ahafahanao manoritra ny akanjo sy ny fitaovana omen'ity studio ity?
Ny singa fototra mampiavaka ny fitafiana avy any Klein dia ny fahatsorana sy ny firaisana ara-nofo. Sexy chic, izay natao hampivelarana ny rafitra ara-pitondrantenan'ny vahoaka, dia mampihetsi-po ny tontolo lavitra amin'ny vanim-potoana voalohany, ary tsy miankina amin'ny akanjo ihany, fa mazava ho azy, ny kiraro.
Tamin'ny voalohany, ity marika ity dia namorona tsipika afa-tsy ho an'ny antsasaky ny olombelona, ​​saingy nampitoviana tsikelikely tamin'ny vehivavy mpanatrika izy io ary ankehitriny dia tsy ambany noho ny lehilahy ny kibon'ny vehivavy avy amin'ny Kelvin Klein.
Amin'ny ankapobeny, ny boots Calvin Klein Jeans dia vita amin'ny fitaovana roa: laka ary hoditra. Ny mainty dia tena mainty, indraindray misy volony beige sy maitso.
Ireo kiraro Calvin Klein Jeans, mifanohitra amin'ny modely amin'ny trano fanao lamaody hafa dia manakaiky ny kilasy ary manana ireto karazana manaraka ireto:
Silhouettes tsotra miaraka amin'ny andalana henjana;
sock sharp or square;
Ny drafitra manjavozavo dia milometatra maromaro.
Ity fomba fanamboarana kiraro ity dia azo antsoina hoe fampiharana, satria ny boots toy izany dia mijery amin'ny zavatra rehetra: skirts, jeans ary pataloha misy karazana.
Tsy azonao atao koa ny tsy miraharaha ireo kiraro fingotra Calvin Klein, natokana ho an'ny orana amin'ny orana. Manana satroka ambany izy ireo ary voaravaka amin'ny fingotra vita amin'ny fingotra.
Ireto misy loko mamirapiratra:
Ireo loko ireo dia hanampy amin'ny fametrahana ny fahalefahana amin'ny sary: ​​androany dia lamaody ny mametraka fehezam-peo iray ary manana fitaovana mamirapiratra izay tsy mifanaraka amin'ny rafitra loko ankapobe.
Calvin Klein Jeans dia kiraro minimalistic, ary saika tsy misy firavaka. Amin'ny ankabeazan'ny modely dia vita amin'ny mainty, ary ny karazany ihany no nahatonga an'i Klein - ny fitaovana izay nanaovana azy. Ohatra, azonao atao ny mahita modely misy soratra eo ambanin'ny hoditry ny bibilava, ary koa ny kiraro patanty. Ny modely amin'ny kiraro ho an'ny vehivavy Calvin Klein dia manana kofehy matevina, izay manome tombony amin'ny akanjo isan'andro.
Calvin Klein Jeans kiraro dia natolotra na tamin'ny tongotra, na amin'ny tery tery, izay mamela ny fahatsapana fa tsy kobam-bary izany, fa menamena. Ny karazana loko eto dia kely dia kely, mahita ireo modely misy loko manga: brown, mainty sy mainty.
Ireo kiraro avy amin'i Kelvin Klein dia samy manana ny sariny marobe izay miseho kely eo anoloan'ny kiraro, ary tena malefaka, izay saika tsy hita maso.
Ny modely sasany dia manana fandefasana malalaka eo amin'ny faritra ankavanana, izay mifanaraka amin'ny fironana farany ary manantitrantitra ny tongony matevina.
T-shirt mody - ireo karazana malaza indrindra sy ny fomba fitafy?
Ny akanjo ho an'ny lohataona
Uggs amin'ny tendrony
Ny akanjo hoditra vita amin'ny hoditra vehivavy
Ambony hipopody ambony
Bordeaux manao akanjo eny amin'ny tany
Sakafo ao amin'ny CHD
Dresses from jersey
Inona no tsy azo atao amin'ny fadimbolana?
Ahoana no ahafahanao manamboatra ny lakozia?
Fashionable wallpaper 2014
Synovitis ny lohalika - fitsaboana amin'ny fitsaboana amin'ny vahoaka
Ny naman'i Jamie Fox dia nanamafy fa manana olana amin'ny Katie Holmes izy
Kaly amin'ny molotra - ahoana ny fomba hanasitranana haingana?
Famantarana ny herisetra amin'ny vehivavy
Ahoana no fomba handraisana an'i Fortrans?
Sifotra fanararaotana ho an'ny ankizy
Cholesterol - ny fitsipika ho an'ny vehivavy